Mean Kids Pranks
Dacwad ka dhan ah maamulka gobalka Sh/hoose oo loo gudbiyay madaxweyne Xasan Sheekh.
on September 04 2013 Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan ku sugan magaalada Marka ee xarunta gobalka Sh/hoose ayaa waxaa loo keenay dacwad ka dhan ah maamulka gobalkaas ee uu gudoomiyaha ka yahay C/qaadir Maxamed Nuur (Siidii).
Odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka gobalka Sh/hoose oo kulamo xiriir ah saacadihii lasoo dhaafay la qaatay madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxay u gudbiyeeen cabasho ka dhan ah maamulka gobalkaas ee uu gudoomiyaha ka yahay C/qaadir Siidii, iyagoona maamulkaas ay ku eedeeyay inuu qeybta aad u weyn ka qaatay dhibaatooyinka ka jira gobalkaas.
Odayaasha dhaqanka ayaa ka dalbaday madaxweynaha dowladda in gabi ahaanba laga bedelo maamulka xiligaan ka jira gobalka Sh/hoose, waxayna ku eedeeyeen masuuliyiinta maamulka inay mas'uul ka ahaayeen dagaal beeleedyada ka dhacay gobalka iyo isbaarooyinka daadsan gobalkaas ee shacabka lagu dhibaateeyo, iyagoona sidoo kale ka codsaday madaxweynaha in dowladdu ay wax ka qabato dad ay sheegeen in guryahooda ay xoog uga heystaan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka dhageeystay odayaasha dhaqanka gobalka Sh/hoose cabashadooda, wuxuuna u balan qaaday inuu wax ka qabanaayo tabashadooda, islamarkaana ay dowladda arimahaasi jawaab deg deg ah ka bixin doonto.
Wuxuu madaxweyne Xasan Sheekh u sheegay odayaasha inay miiska soo saaraan maamul ay heshiis ku yihiin iyo ciidamo boolis ah oo ay dowladdu tababar siiso, si ay u hantaan sugida nabadgelyada gobalkaas.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in dowladdu aysan marnaba raali ka noqon doonin wax aysan dooneeyn shacabka gobalka Sh/hoose, isagoona amar ku bixiyay in dadka ku jira guryaha aysan lahayn inay baneeyaan, isagoona sheegay in hadii ay ka dhega adeegaan dadkaasi ay dowladda talaabo adag ka qaadeeyso.
Xafiiska Warbaahinta Bulshowey.com ee Magaalada Muqdisho.Nagala Soo Xiriir:- info@bulshoweyn.com